Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) mpamokatra solitany - Phcoker
SKU: 159752-10-0 Sokajy: Serasera Sarmana
Drug Class SARMs (Mpandrindra ny sela androgen receptor)
Ibutamoren Mesylate Application Ny hormone mampiroborobo; Mitombo ny fatran'ny metabolisma amin'ny vatana; Mampitombo ny lanjan'ny hozatra sy ny tohotra amin'ny taolana; Mitombo ny fatran'ny metabolisma amin'ny tavy
Ny zavatra lehibe momba ny mesbatamous ibutamoren dia ny fampitomboana ny hormone mitombo amin'ny hentsika kely na tsy mitombo amin'ny hormones hafa, toy ny cortisol. Ny Cortisol dia manakana ny rafitra fiarovana, mampihena ny fanasitranana ny ratra, ary manimba ny fianarana sy ny fahatsiarovan-tena, ary matetika dia tsy tsara ny mitondra io hormone io.
• MK677 dia afaka manampy amin'ny dity ny taolana
• MK677 dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny haavo
• MK677 dia afaka manampy amin'ny fihenan-tsakafo
• Afaka manampy amin'ny torimaso ny MK677
• MK 677 dia mety hampihena ny vokatry ny fahanterana
• MK677 dia mety hisy fiantraikany amin'ny atidoha eo amin'ny atidoha